Mortar sy Pestle, Pestle ary Mortar, Hazo marbra - Kingway
Manam-pahaizana amin'ny Iron Enamel Skillet
Mortar Granite sy Pestle
Marbra mortar sy Pestle
Olana vato hafa
Ny takelaka Flat tsara indrindra
Mba haka namana
Ho an'ny zava-pisotro na sakafo hariva
Shijiazhuang Kingway Imp. & Exp. Co, Ltd dia niorina tamin'ny 2 0 0 8 ary hita ao amin'ny tanàna shijiazhuang, faritany hebei, China, ny fitaterana dia mety ary tsara ny tontolo iainana. Ny fikambananay koperativa dia mandrakotra faritra 33000 metatra tora-droa ary manana mpiasa 82. Misy andalana famokarana efatra toy ny fanariana DISA, preseasoning, enamelling.
FAHAGAGANA SADIA-TRANOMPOANA SY ZAVATRA VONDRINDRA
Mortar sy Pestle
Mifanentana amin'ny famoretana feno zava-manitra ary mifangaro mifangaro. Mety tsara amin'ny fifangaroana sy manompo guacamole — na hanaovana pesto sy saosy hafa misy harafesina.
Tonga lafatra amin'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanompoana ny ampahany amin'ny legioma sy ny sisiny ary ny tsindrin-tsakafo, manome ny fitazonana hafanana tsy mitovitovy ary na dia ny hafanana; Fisitrihana tombo-kofehy amin'ny tsirony raha avela hifehy mora ny fitaterana
NY HAFA REHETRA TOKONY MBOLA
Fitaovana: marbra voajanahary na granita voajanahary: 20x15x3cm Famonosana: boaty fanomezana na boaty volontany vita marbra na granita • Vitao tsara ampiasaina amin'ny boaty pastry • mora voadio. • namboarina ny endrika sy ny habe. • fifandraisan-tsakafo azo antoka ary manana ny tatitra LFGB sy FDA.
Fitaovana: marbra voajanahary Lava: dia.13cm, hahavony 8cm Fonosana: boaty fanomezana na boaty volontany Marble Mortar sy Pestle • Lavorary amin'ny fanorotoroana ny zava-manitra rehetra ary ny fifangaroana manitra. • Mety tsara amin'ny fifangaroana sy manompo guacamole — na hanaovana pesto sy saosy hafa mahasosotra. • Ny tsipika misy ravina lettuce hampiasaina ho toy ny vilia fitadiavana tanjona rehetra. • Ny takelaka anatiny manjelanjelatra dia manampy ny hanorotoro sy ny fikosoham-bary. • Ny fihary atody mahery dia miasa ho anao, miantoka ny fikosoham-bidy mahomby, mifangaro ary mifangaro.
Fitaovana: marbra voajanahary na granita voajanahary: 43x30x1.5cm Famonosana: boaty fanomezana na boaty volontany Marbra na granita fikapohana bàla • Tsara amin'ny fanapahana na manompo karazana sakafo rehetra. • mora diovina. • namboarina ny endrika sy ny habe. • fifandraisan-tsakafo azo antoka ary manana ny tatitra LFGB sy FDA.
ny entana vokatra vita vy vy azo refesika ny halavametatra 43x23cm ny sakany 1.5cm voakarakara vita amin'ny fonosana boaty volontany na marika boaty loko namboarina endri-javatra faran'izay mahafinaritra famandrihana hafanana Mety ho an'ny kompana rehetra izay ilaina amin'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanompoana ny ampahany amin'ny legioma sy ny sisiny ary ny tsindrin-tsakafo Manolotra fitazonana hafanana tsy manam-paharoa vainafo; Fisitrihana rakotra ao anaty tsirony raha avela hifehy mora ny fitaterana vy vita amin'ny FDA nankatoavina alohan'ny vanim-potoana efa azo ampiasaina ...
anaran-tsarimihetsika cast iron casserole vy misy savony 10cm, 26cm ny halavany 5cm, 11.5cm coating preseasoned fonosana boaty volontany na marika boaty marika fahita manokana Fahatsiarovana fihazonana hafanana tsara ho an'ny rehetra fatana ilaina amin'ny fandrahoan-tsakafo sy manompo ny ampahany amin'ny legioma, lafiny, ary tsindrin-tsakafo. Manome ny fitazonana hafanana tsy misy taraina ary na dia ny fanafanana; Ny tombo-kase dia manarona amin'ny tsirony raha avela hifehy mora ny fitaterana vy vita amin'ny FDA nankatoavina alohan'ny fotoana.
Laharana laharana KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm Oval Casserole 28x21cm 30x23cm Mampiavaka ireo bokotra vy vita amin'ny vy sy fehikibo ho an'ny loko mifehy mena, mavo, manga, mavokely, mainty, volafotsy manopy maingola misy loko 1.Heavy-duty enamel coating. Fizarana hafanana tsara sy fihazonana ny hafanana 3.Ny vy mihintsana miadana sy maloto 4.Fandefasana ny fahandroana miadana Fampidinana: Ny vy vita amin'ny vy matevina sy ny fehin-kibo famelana ho an'ny fifehezana be ny endrika fitaratra marevaka tsy hihetsika amin'ny akora Prof ...
Efitra 505, trano Zhongyuan, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei Pro, Sina